खोप अभियान सुरु गर्ने नेपाल सार्क कै दोश्रो मुलुक - Kantipath.com
खोप अभियान सुरु गर्ने नेपाल सार्क कै दोश्रो मुलुक
डा. सागर राजभण्डारी र डा. अनुप बाँस्तोलाले कोरोनाविरुद्धको खोप (कोभिसिल्ड) लगाएका छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. राजभण्डारी र प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. बाँस्तोलाले बुधबार बिहान कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका हुन् ।
यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइ कर्मचारीलगायतलाई खोप लगाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहान १०:२३मा खोप अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् । आज एकै दिन १२ हजार जनाले खोप लगाउने शुभारम्भ समारोहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल दक्षिण एसियामा कोरोना खोप अभियान चलाउने भारतपछि दोस्रो मुलुक भएको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएको एक वर्षपछि नेपालीमा खोप लगाउन थालिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणको खोप अभियान शुरु गरेको १० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस चरणमा चार लाख ३० हजारलाई खोप प्रदान गरिने छ ।
कोभिशिल्ड खोप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एक्ट्राजेनिका नामक औषधि उत्पादक कम्पनीले संयुक्तरूपमा विकास गरेका हुन् । भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले खोप उत्पादन गरेको हो ।
Previous Previous post: भूमाफियाले हत्याएको गुठीको जग्गा २३ वर्षपछि फिर्ता
Next Next post: खुँडा हानेर कांग्रेस नेताको हत्या गर्ने ऐडीले पत्रकार धम्काएको अडियो सार्वजनिक